Ukutholwa kwe-B2B: Thola uhlu oluthe xaxa lwemali yakho | Martech Zone
Ukutholwa kwe-B2B: Thola uhlu oluningi lwemali yakho
NgoLwesibili, Agasti 29, 2006 NgoLwesibili, Agasti 29, 2006 Douglas Karr
Ukutholwa kwebhizinisi kuya kweBhizinisi kungaba nzima kakhulu. Uma uyinhlangano esebenzela isifunda esikhulu esinenani elincane labasebenzi, ufuna ukuqinisekisa ukuthi isu lakho lokutholwa lisebenza kahle. Uma kunamabhizinisi angama-50,000 25 esifundeni, ake sicabange ukuthi ungaxhumana namathemba angama-5 ngeviki, noma ama-20 ngosuku. Lokho kungadinga ukuthi ube nabathengisi abangama-XNUMX. Lokho kuhle kakhulu kunethimba lokuthengisa nelokuthengisa ngocingo futhi amathuba ukuthi awunawo amandla amakhulu kangako okuthengisa!
Kuthiwani uma ungaxhumana kuphela namabhizinisi ayi-5,000 1 (10 koku XNUMX)? Ungawathola kanjani futhi uwaqondise lawo mabhizinisi? Impendulo ilele kwamanye amasu wokumaketha e-database alula asetshenzisiwe ebhizinisini ekutholeni ibhizinisi. Nganikeza lokhu kuhlaziywa esikhathini esingaphezu konyaka esedlule enkampanini yesifunda, futhi manje sesiqeda unyaka wethu wesibili wokufuna kwabo. Akuyona isayensi ye-rocket, kumane nje kuhlolisiswa ezimbonini ezifana ne-firmagraphics yesisekelo samakhasimende akho.
Isinyathelo 1: Phrofayela amabhizinisi akho. Le yisevisi izinkampani eziningi zedatha ezizozinikeza yona ngemali ephansi. I-InfoUSA, Dun neBradstreet, ne-AccuData ezimbalwa zalezi zinhlobo zezinkampani. Lapho usuthole imibiko, kubalulekile ukuthi uyihlaziye futhi uyihlanganise ibe idatha ezuzisayo. Nasi isibonelo (Chofoza ukuze ubuke):
Iminyaka Ebhizinisini Ngemboni - Ukungena%:
Ivolumu Yokuthengisa Kwebhizinisi ngeMboni - Ukungena%:
Inani Labasebenzi ngeMboni - Ukungena%:
Isinyathelo 2: Hlaziya Imiphumela
Ukungena ngamaphesenti wamakhasimende kulelo banga owaqhathanise namaphesenti aphakathi kwamathemba kulelo banga. Ngamanye amagama, uma amakhasimende akho angama-25% ebesebhizinisini isikhathi esingaphansi konyaka, kepha kuphela u-10% wamabhizinisi ezifunda abe sebhizinisini isikhathi esingaphansi konyaka, khona-ke uzobhekisa kangcono amabhizinisi amasha! Ngokwenza njalo, wandisa amathuba akho okuthola okulindelwe kunokuba ubheke izinkampani ezingaqhathanisi.
Isibonakaliso se-telltale sokuthi ungasebenza yini noma cha kudatha ukumane ubheke ukuma kwamajika kanye nobudlelwano ngaphakathi kwemboni. Nakhu okunye ukubonwa okujwayelekile (izithelo eziphansi eziphansi) ezivela kumashadi angenhla:
Inani Leminyaka ebhizinisini: Qaphela ukuthi womabili ama-G & H abe nenani eliphakeme onyakeni wokuqala noma ngaphansi? Ngingazibophezela ngokujulile kulezi zimboni futhi ngikwazi ukutshala imali ohlwini lwama-New Business prospect.
Ivolumu Yokuthengisa: Ngenkathi izimboni eziningi zikhuphuka futhi ziwa ejikeni elihle, qaphela ukuthi ukwakhiwa kukhuphuka kanjani phezulu? Ngakho… lapho ifemu yokwakha iba nkulu, iba ngcono!
Inani Labasebenzi: Qaphela ukuthi imboni yezinsizakalo ihlale kahle kanjani? Lokho kungitshela ukuthi inani labasebenzi lingahle lingabi nesici kulowo mkhakha.
Isinyathelo 3: Sebenzisa okutholakele
Ukube bengifuna ukuvilapha nokushesha, ngingavele nginike inkampani yami yedatha iziqongo zamajika ami bese ngisebenzisa lezo njengezinga eliphansi lokukhomba amathemba embonini ngayinye. Izinkampani zedatha ngokuvamile ngeke zikukhokhise ngokwenza eminye imibuzo eyinkimbinkimbi ngokumelene nedatha ukuza nohlu lwakho ngakho ungabi namahloni, buza! Indlela engcono kakhulu yokukwenza ukuthuthukisa ama-algorithm wokufaka amaphuzu ngokususelwa kuphrofayli, bese usebenzisa leyo fomula kumathemba okuthola amaphuzu aphelele wethemba. Mane u-oda amathemba akho ngokuhlehla, bese uqala ukutholwa!
Isinyathelo 4: Khipha!
Lapho senzela le khasimende lethu le mikhankaso, sahlaziya ukuthi yini amandla abo wokuxhumana namathemba. Ukuqonda ukuthi mangaki amathemba abangaxhumana nawo kusinikeze izibalo esizidingayo ukunciphisa uhlu lwabo lokuhlwaya. Senze umzamo we-3-prong oholele ekunyuseni kokutholwa okungu-10%!
Isinyathelo 5: Hlaziya imiphumela emisha bese uqala phansi
Isimo sendawo siyashintsha njengezici zamakhasimende akho. Kubalulekile ukuqhubeka nokwenza ngcono futhi ulungise ama-algorithm akho wokushaya amagoli nokubheka okuningana.
Inothi lokugcina: Kunezincwadi eziphelele ezibhalwe kumasu wokumaketha egciniwe. Kunzima ukuxhumana nenqubo yokumaketha eyinkimbinkimbi yedatha ngokungena kwebhulogi okukodwa, ngakho-ke ngithathe inkululeko yokwenza imicabango eminingi nokuthatha izinqamuleli eziningi. Inqubo yangempela esidudule ngayo leli klayenti yathatha izinyanga ezimbalwa. Sithole futhi safanisa i-95% yamakhasimende abo emuva kuDun naseBradstreet idatha ukuthola iphrofayili evelele. Lapho sikhetha amathemba ethu okugcina, ngokuqinisekile siwakhiphile amakhasimende abo amanje nalawo aphelelwe yisikhathi.
Bengimane ngifuna ukudlulisa ukuthi kukhona okunye ukuhlaziywa okulula futhi okunamasu ongakwenza ngaphandle kwespredishithi se-Excel esizothuthukisa ibhizinisi lakho kwimizamo yokuthola ibhizinisi!
Ukuphawula kukaGu ngokushintsha kweMedia landscape
Ukwesaba akulona isu
Aug 29, 2006 ngo-7: 56 PM
Ngicabange ukuthi lokhu bekungukuthunyelwe okusiza kakhulu. Ngokwesipiliyoni sami, iningi labaninimabhizinisi abancane abakucubunguli lokhu ngokujulile embonini noma ekuhlaziyweni kwemakethe njalonjalo. Kepha (kusobala) ukwenza lokho kungakhokha ngempela ngokusiza lawa mabhizinisi aqondise imizamo yawo ebheke kumathemba aqondiswe kahle kakhulu. Siyabonga ngolwazi!